राष्ट्रिय एकता कायम गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अनिवार्य आवश्यकता अध्यक्ष क. प्रचण्ड – cmprachanda.com
राष्ट्रिय एकता कायम गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अनिवार्य आवश्यकता अध्यक्ष क. प्रचण्ड
२०७३ आषाढ १६ गते १६:५२ मा प्रकाशित
बाँके, असार १६ । अच्युतराज सुवेदिको वार्षिक स्मृति सभा तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष क. प्रचण्डले युवा समाजसेवी, व्यवसायी तथा रानीतिक कार्यकर्ता अच्युतराज सुवेदीलगायत भुकम्पमापरी निधन हुनुभएका नागरिकहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र आफन्तजनमा समवेदना अर्पण गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष क. प्रचण्डले २०७२ वैशाखमा भएको विनासकारी भुकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो । यो नकारात्मक परिघटना थियो । यसबाट हामीले सकारात्मक सुरुवातको काम थाल्यौं । त्यसबेला म आफु प्रतिपक्ष दलको नेता थिए, तर भूमिका प्रतिपक्षको होइन, बरु राष्ट्रिय संकल्प गर्यौं, जुन २७ बुँदे राष्ट्रिय संकल्पबाट राष्टिय एकता कामय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको बताउनु भयो ।
त्यसै क्रममा अध्यक्षले संविधान घोषणा गर्यौ, त्यसपछिको स्तिथिमा भएको नाकाबन्दीलाई समेत सामना गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पुनर्निर्माणको कामलाई जुन गति र प्रभावकारिता आउनु पर्ने थियो, त्यो भएन । यसको मूल कारण भनेको राष्ट्रिय एकताको अभाव हो । देश अहिले पनि अप्ठ्यारोमा छ । यसको निम्ति राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । यसबाट पछि हटेर देशको अप्ठेरो सामना गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
त्यसै क्रममा अध्यक्षले संविधानमा नपुगेका कुरा, मधेश, आदिवासी जनजातिका चिन्ता छन्, ती चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताउनु भयो । अहिले लाखौलाख नेपालीहरु विदेशमा छन् । विदेशबाट आएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र चल्नु दुःख लाग्दो स्थिति हो । दिनदिनै नेपाली युवा कामदारहरुको विदेशमा मारिएका छन् । यसको अन्त्य गरिनु पर्दछ । यसको निम्ति देशमै उद्योग धन्दा, कलकारखानाका साथै रोजगार श्रृजना गर्न सक्ने योजना तर्जुमा गरी यो स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले राजनीतिक नेतृत्वमा देखापरेको अहंकारले गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न समस्या देखापरेका छन् । यो स्थितिले राष्ट निकै अप्ठेयरोमा पर्ने खतरा देखिएको छ । यसको अन्त्यको निम्ति पनि राष्टिय एकताकै खाँचो छ । राष्टिय एकता कायम गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अनिवार्य आवश्यकता पनि भएको बताउनु भयो ।
त्यसैक्रममा उहाँले संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्न, मधेश, जनजातिलगायतका जनताको माग, चिन्ताको सम्बोधन गर्न देशको समग्र विकास गर्न राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ । राष्ट्रिय सहमतिले मात्र देशको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले नेपाल विकासको निम्ति प्रचुर सम्भावना छ । यो सबै स्थितिको भरपुर मात्रमा उपयोग गर्न सक्यौ भने नेपालको तिव्र विकास सम्भव रहेको कुरा बताउनु भयो ।
अध्यक्षले नेपालगञ्जवासी, बाँकेवासीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरनुपर्दछ । यो स्थान विविधताको संगम हो । सबै जातजाति, भषा,भाषी, धर्मवालम्बीहरुको बसोबास रहेको ठाउँ हो । अच्युतराज सुवेदीले व्यवसायी समाजसेवी, राजनीति, प्रभाकारीत सबैलाई जोड्नु भएको छ । उहाँको राम्रो गुणहरु, गतिशीलता, पारदर्शिता, लगनशिलता जस्ता गुणहरुबाट सिक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले हामी हाम्रो तर्फबाट, देशलाई नयाँ स्थिरता र नयाँ गतितिर अगाडी बढाउन चाहन्छौ । यसको निम्ति हामीले नयाँ संकल्प र नयाँ प्रतिबताको जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्टिय एकताको नयाँ सकारात्मक संकेत पनि देखापरेको बताउनु भयो । अध्यक्ष क. प्रचण्डले भुकम्पका कारण शोकमा रहेकाहरुलाई हामी सबैले शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डबाट पूर्व शिक्षामन्त्री, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा शिक्षा विद, संघीय समाजवादी फोरमका सल्लाहकार प्रा.डा. मंगलसिद्धि मानन्धरको पार्थिव शरिरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अध्यक्ष क. प्रचण्ड
By cmprachanda	 Jun 30, 2016